मुना कार्की मृत्यु प्रकरणमा मुनाकै श्रीमानमाथि अनुसन्धान गर्न माग
सोमबार १७ चैत्र, २०७६ (Monday, 30 March, 2020)
फाल्गुन ०४, २०७६, आइतबार
ललितपुरको सानेपामा माघ २७ गते भएको पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी श्रीमती मुना कार्की र कामदाचौर विजय धरीको मृत्यु प्रकरणमा मुनाकै श्रीमानमाथि अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ। नेपाल जनजाती महासंघका पूर्व महासचिव आङकाजी शेर्पाले मुना हत्या काण्डको विषयमा छानविन गर्न उनका श्रीमानलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो।
उहाँले उच्च घरानाको घरमा हुने यस्ता अपराधिक घटनामा रहस्यमय हुने भन्दै अपराध गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही हुनु पर्ने बताउनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, 'अर्जुन अहिले शोकमा हुनुहुन्छ । उहाँप्रति सहानुभुती रहँदा रहँदै पनि गैरकानुनी कामका लागि उन्मुक्ति दिन मिल्दैन्।'
उहाँले अवकास प्राप्त सचिवको घरमा ३ जना सेवक हुनु अनौठो जिवनशैली हेर्दा यो विषयमा पनि छानविन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको हो। उहाँले अर्जुनको पारिवारिक अवस्थाका बारेमा आफु जानकार भएकाले उक्त जिवनशैली पनि शंकाको घेरामा रहेको बताउनुभयो।
उहाँले ६ कक्षामा पढ्दै गरेको बालकलाई श्रम शोषण गर्न ल्याएर पारिश्रमिक समेत नदिएर राख्नु कानुनी रुपमा दोषी भएको पनि बताउनुभयो। छोरा जस्तै बच्चा बेलादेखि पालेको व्यक्तिले त्यस्तो घृणित काम गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले सिसीटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्न पनि माग गर्नुभएको छ।
मोदीलाई अक्षय कुमारको साथ, दिए २५ करोड दान
उपत्यका बाहिर पनि कोरोनाका बिरामी भेटिए (भिडियो सहित)
एनसेल एकदिनमै किन हच्कियो ? एनसेलको ब्रमलुट पर्दाफासगर्ने दैनिकनलाइनको त्यो समाचार
किन चाहियो यस्तो बेलापनी लुटिरहने एनसेल ? देश लकडाउनमा एनसेल ब्रमलुटमा !
कोरोना भाइरसका विरामीको ज्यान बचाउँदा बचाउँदै आफ्नै ज्यान गुमाए यी डाक्टरले
पश्चिम नेपालमा उल्कापिण्ड झरेको अनुमान , चम्किलो बस्तु झरेसङै बम पड्केजस्तै आवाज , एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले यस्तो भन्यो